Gudoomiyaha naadiga Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge ayaa ka meermeeray inay jirto qorshe naadiga Bayern Munich suuqa ku dhigayo weeraryahanka xulka qaranka Germany iyo Naadiga horyaalka Bundesliga ee Thomas Muller, wuxuuse tilmaamay in kooxdu iibin doonto haddii uu isagu dalbado inuu ka tago.
Weeraryahankan ayaa safka hore ee naadiga ka dhacay tan iyo intii uu kooxda la wareegay tababre Pep Guardiola, waxaana la rumaystay inay jirto ku niyad samaan la’aan aanu ku faraxsanayn sii joogista Allianz Arena ee wakhtigan.
Manchester United ayaa si weyn loogu xidhiidhinayay inay wadahadal hoose la wado laacibkan 24 jirka ah laakiin gudoomiyaha naadiga Bavaria, Rummenigge ayaa diyaar u ah inuu miiska soo fadhiisiyo weeraryahanka si uu xaaladiisa iyo waxa uu doonayo ugu kuur gallo.
“Haddii ciyaaryahanku aanu ku faraxsanayn sii joogista Bayern Munich, wuxuu iigu iman lahaa xafiiskayga,”ayuu Gudoomiyuhu ku yidhi wargeyska Bild.
“Waa inaanu isla gorfaynaa arimaha noocan oo kale ah.”
Muller ayaa heshiiska uu kooxda kula jiraa uu ku gaadh siisan yahay tan iyo 2017. waxaanu kooxda u dhaliyey 13 gool, 30 ciyaarood oo uu horyaalka Bundesliga u saftay Munich.
Fellaini Oo Ka Sheekeeyey Musal-sallada Van Gaal Iyo 10 ciyaartoy Oo La Ganaaxay
Tartanka Lagu Xusayo Marxuum Maxamed Daa’uud Oo Ciyaartii U Dambaysay Lagu Kala Baxayo Jimcaha
Man United Oo Uu Ka Burburay Qorshaheedii Bale Markii Zidane La Magacaabay
Rasmi: Liiska Rasmiga Ah Ee Xulka Germany Ee EURO 2016 La Soo Saaray
Dortmund vs Hertha Berlin 1-1 All Goals & Highlights